Pirezedaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo LammaaObboo Lammaa Magarsaa
Hogganoota sadarkaa olaanaa Kongreesa Federaalawaa Oromoo (KFO) keessaa tokko kan ta’an Obbo Baqqalaa Garbaaf ragaa ittisaa ta’uun har’a dhiyaachuu kan irra ture aangawoonni Oromiyaa arfan hin dhiyaatin hafan. Sababaan kennanis walgahii koree hojii rawwachiiftu ADWUI waliin waa’een mana murtii duratti dhiyaachuu kun wal irra waan bu’eef muddamasa sagantaa qaban irraa ta’uun ibsamee jira.
Kanas kan beeksiisan abukaatoon Obbo Baqqalaa Garbaa Obbo Abduljabaar Heseen Jimaata borii dhiyaachuuf aangawoonni carraaqqii danda’ame mara akka godhan ta’u baannaan garu walgahii gaggeefamaa jiru sana booda ituu ta’e yaada jedhu akka qaban ibsanii jiru jedhu.Kunis dhiyaachuu jibba ykn dhiibaa’iina irraa akka hin ta’iin naa ibsanii jiru jedhan Obbo Abduljabaar.
Ragaa Obbo Baqqalaa ka biraa kan ta’e Andu'aalam Araagee yeroo ammaa mana hidhaa Qaallitti keessa kan jiru yoo ta’u manni hidhaa ituu hin dhiyeessiin hafe. Kanaafis sababaan maal akka ta’e manni murtii polisoota gaafannaan Andu'aalam nama adaba jabaa jala jiru waan ta’eef dhiyeessuuf rakkisaa dha kanaaf ajajajii haaraan bulchiinsa mana hidhaaf haa ergamuu jedhan. Manni murtiis akka dhiyaatuuf ajaja dabalataa kennee jira.
Waa’een fayyaa Obbo Baqqalaa kan ilaaleen gaaffiin barreefamaan mana murtiif kan galee ta’uus bor murtii kennuuf akka jiru manni murtii beeksisee jira.
Liyyuu Haayl Haleellaa Gaggeessee Qabeenyaas Saamee Jira : Angawaa